कोरियनसंग विहे गर्नु नेपाली महिलाको अपराध हो.. ? - Fonij Korea
कोरियनसंग विहे गर्नु नेपाली महिलाको अपराध हो.. ?
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता	| प्रकाशीत मिति: March 8, 2019
मर्च आठ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । विषेशत यो दिवस महिलाहरुको श्रम अधिकार बारे चर्चा गर्दै शुरुवात भएको थियो । तर पछिल्लो समय महिलाहरुको नैसर्गिक , आर्थिक , सामाजिक र राजनीतिक अधिकार जस्ता विविध मुद्यालाई उठान गर्ने अवसरकोरुपमा विस्तार हुदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्च १ तारिखदेखि नै साता व्यापीरुपमा महिलाका अधिकारबारे चर्चा गर्दै महिलामाथि हुने विविध हिंसाको उजागार गर्ने अवसरको रुपमा यो दिवस मनाउदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा दक्षिण कोरियामा कोरियन नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिलाहरु बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । कोरियन नागरिकसंग विभिन्न देशका महिलाहरुले विवाह गरेको पाइन्छ । चिनिया, भियत्नामी, जापानीज , फिलिपिनो, रसियन, कम्बोडियन अथार्त युरोपियन महिलाहरु पनि छन् । कोरियन नागरिकसंग विवाह गर्ने नेपाली महिलाहरुको संख्या यकिन तथ्यंक नभए पनि एक हजार जति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै कागजी विवाह मात्रै गर्ने नेपाली महिलाहरु पनि छन् । कतिपय नेपाली महिलाहरु कोरियाको नागरिक्ता लिएपछि पारपाचुके गरी नेपालीसंगै घरजम गरी बसेका पनि छन् । त्यसैले पनि ठ्याक्कै तथ्यंक निकाल्न कठिन छ ।
नेपाली महिलाहरुले कोरियनसंग वैवाहिक जीवन शुरु गर्न थालेको करिब दुई दशक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि कोरियनसंग विवाह गर्ने नेपाली महिलाहरुप्रति हेरिने नेपाली समाजको सोच भने सकरात्मक हुन सकेको छैन् । कोरियनसंग विवाह गर्ने महिलाहरुले उचित सम्मान पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई विभिन्न आरोप र लालछनाहरु लागउने गरिन्छ । भोटेको बुडी (पत्नी) भन्दै अपशब्द प्रयोग गर्ने , भेडा बाख्रा जस्तै किनिएर आउने र बच्चा जन्माउने मेसिन बन्न आउने जस्ता उपनाम दिदै अपहेलना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
एक पटक सउल स्थित नेपाली राजदूताबासमा भएको कार्यक्रममा नेपालबाट आउनुभएको एकजना उच्च पदाधिकारीले कोरियनसंग विवाह गरी आएको भन्ने परिचय पाएपछि ‘संगै बस्नुहुन्छ कि अलग्गै’ प्रश्न गर्नुभयो । जुन प्रश्नले मलाई आश्चार्य तुलायो । नेपाली महिलाहरु कोरियनसंग पैसा र नागरिक्ताको लागि मात्रै विवाह गर्छन भन्ने वहाँको बुझाइ रहेछ कि जस्तो लाग्यो । मैले त ‘ तपाईको श्रीमान कस्तो हुनुहुन्छ , के गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्नुहोला भन्ने आशा गरेको थिए । यसले पनि प्रस्ट पार्छ समाजका शिक्षित, बौद्धिक र सचेत वर्गले पनि कोरियनसंग विवाह गर्ने महिलाहरुप्रति गरिने सोच कस्तो रहेछ भनेर ।
कोरियानसंग विवाह गरी बर्षौदेखि राम्रो घरजम गरेर बसेका धेरै छन् । कोरियन भाषामा दक्ष भएकाले धेरै नेपालीहरुलाई नै सहजताको काममा संलग्न भई सेवा पुराई रहेका छन् । कैयौ विद्यालयहरुमा नेपाल र नेपाली कला र संस्कृतीको पहिचान गराइरहेका छन् । प्रहरी जस्तो सम्मानित र गौरवन्दीत पेशामा पनि नेपाली महिला प्रवेश गरी राष्ट्रको नाम उचो पारीरहेका छन् । नागरिक जनस्तरका सम्बन्धलाई सुढृय बनाइ रहेका छन् । आफ्नै परिवारलाई भएपनि नेपालमा थोरै आर्थिक सहयोग पु¥याइरहेका छन् । पारिवारीक भेटघाट भएपनि नेपालमा पर्यटन भित्राइरहेका छन् । हरेक महोत्सव र सामूहिक गतिविधीमा नेपाली मौलिक पहिरन र परिकार पस्केर नेपाली भाषा , कला , संस्कृती तथा प्राकृतीक सौन्दर्यलाई कोरियामा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । कोरियाका कतिपय उच्च प्रविधीलाई नेपाल भित्राउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसप्रति नेपाली समाजले सोच्न सकेको छैन् ।
तैपनि कोरियनसंग विवाह गर्ने महिलाहरुलाई किन नेपाली समाजले सकरात्मकरुपमा लिन सकेनन् ? यस्ता महिलाहरुले समाज र राष्ट्रलाई के हानी पुराएको छ ? कोरियनसंग विवाह गरेका केही महिलाहरु चरित्रहिन भए भन्दैमा सबैलाई उस्तै ठान्न मिल्छ .. ? केही विकृतीका शिकार भए भन्दैमा सबैलाई उस्तै दाज्न मिल्ला त ..? के कोरियन नागरिसकसंग विवाह गर्नु नेपाली महिलाको अपराध हो ..? यस्ता लालछना र आरोपित भनाइका कारण राम्रो घरजम गरेर बसेका महिलाहरु र उनका परिवारहरु कहिलेसम्म लज्जित भएर बस्नु पर्ने ?
( लेखक : नेपाली चेली समाज दक्षिण कोरियामा आवद्ध हुनुहुन्छ )